Puntland oo ku faraxsan abaalmarinta Mareykanku duldhigay Yaasiin Kilwe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay abaal marin lacageed oo Mareykanku u ballanqaaday ciiddii keenta macluumaad lagu soo xirayo amiirka Alshabaab ee deegaanada Puntland, Yaasiin Kilwe.
Wasiirka amniga iyo hub ka dhigista Puntland, Xasan Cismaan Aloore ayaa sheegay in maamulkiisu ku faraxsan yahay in abaal-marin lagu bixiyo soo sheegista xubnaha Al-shabaab.
Wasiir Aloore ayaa tilmaamay in hogaamiyaha Alshabaab, Yaasiin Kilwe oo marba meel ku dhuunti sida uu yiri “Marba meel buu ku dhuntaa aanan hada carabaabayn, waxa dulsaaran ka sokow anagaaba doonaynay Yaasiin Kilwe waana garanaynaa saan howshayada u gudan lahayn.”
Wuxuu sheegay wasiirku iney heegan uga jiraan in Alshabaab ka tegay koonfurta Soomaaaliya ay gaaraan Puntland, wuxuuna yiri “Waxa Soomaaliya ka socda ee arrimaha Alshabaab mar kasta waan u toog-haynaa, haddii ay soo firxadaan Puntland diyaar bay u tahay inaan cadowgu ku qarsoomin.”
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaaas oo shalay ku laabtay Garowe kadib safar uu ku tegay Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegay in reer Puntland isaga filan yihii la dagaallanka Alshabaab-ka ku jira buuraha Golis.
Wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa min $3 Milyan oo doolaar dulk dhigtay 3 ka mid ah hogaamiyaasha Alshabaab, kuwaasoo kala ah: Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir (Cikrama), Yaasiin Kilwe iyo nin kale oo magaciisa lagu soo koobay Jacfar, loona yaqaanno Camaar.